Ireto misy fomba efatra azo atao :
Fa maninona no tokony hanadino azy :
Adinoy izy raha toa ka tsy tena tia anao fa rehefa mila anao fotsiny vao nitady anao. Adinoy izy rehefa hitanao fa tsy nifandanja ny fifankatiavanareo. Adinoy izy rehefa hitanao fa efa namadika tanteraka ny pejin’ny fifankatiavanareo. Maro be ny antony hafa tokony hanadinoana ny olon-tiana teo aloha. Tsy mora izany satria atao an-tery. Olona mbola tiana matetika no voatery hadinoana. Izany hoe tsy te hanadino azy akory ny fo sy ny saina saingy voatery satria efa nifarana teo ny fiarahana ary tsy tokony hotohizana intsony. Ny tokony atao voalohany indrindra dia ny manapakevitra ny hanapaka ny fifandraisana rehetra aminy. Mafy tena mafy izany saingy tsy maintsy irosoana raha maniry hanadino azy tanteraka.
Ariana avokoa izay zavatra mampatsiahy azy
Tsy maintsy arahina fadisoam-panantenana foana ny fisarahana amin’ny olon-tiana. Mety mbola manantena koa anefa fa hiravina ny olana. Hadisoam-paika izany. Raha tena te hanadino azy dia esory tsy ho hitan’ny masonao avokoa ireo zavatra rehetra mampahatsiahy azy. Tena ho mafy izany satria voatery ho arianao izany ny fanomezana rehetra natolony anao, ny sarinareo sy ny sisa. Raha misy kosa zavatra natolony, tsy mampatsiahy anao azy fa zakanao ny mahita azy ka tsy mampitomany anao ny fisiany dia aza ariana.
Mifantoka amin’ny tena amin’izay
Matetika rehefa avy nisaraka dia mamisavisa ny mety ho eritreritr’ilay olon-tiana. Ny vehivavy mantsy rehefa tena tia izay dia ilay olon-tiana no atao ivon’ny fiainana ary izay atao rehetra dia miankina amin’ilay olon-tiana avokoa. Ajanony avy hatrany izany. Ny momba anao amin’izay ifantohana. Inona ny tianao atao eo amin’ny fiainana, inona ny tanjona tianao hotratrarina? Inona ny zavatra mahafinaritra anao? Ataovy izay mahafinaritra anao, izay mampivelatra anao amin’ny maha vehivavy anao atao laharam-pahamehana.
Tsy mijanona tsy manao na inona na inona
Fahavalon’ny olona vao nisedra ratram-po ny fidanaham-poana. Aza mijanona tsy manao na inona na inona fa mitadiava zavatra atao. Anisan’ny zavatra tokoa atao koa ny manangana tetikasa. Mety tetikasa ho an’ny tenanao manokana izany, mety tetikasa mahakasika ny asa koa. Ny tena zava-dehibe dia ilay tetikasa hameno ny fotoananao ka tsy ahatonga anao hifantoka amin’ilay olon-tianao taloha intsony. Tombony lehibe ny fahafaham-po sy hafaliana anaty ho tsapanao rehefa tontosa soamantsara ilay tetikasa.
Mandefa hafatra amin’ny tena
Tsy maintsy hisy fotoana ianao te mbola hiresaka aminy. Rehefa amin’ilay fotoana mahatery anao te hanoratra hafatra ho azy dia soraty ihany ilay tianao tenenina aminy fa aza alefa aminy kosa fa aminao ihany izany alefa. Aza avy hatrany dia vakiana akory fa miandrasana 10 minitra eo izay vao mijery ilay hafatra. Ho hitanao eo fa tsy dia nilaina loatra akory ny nilaza taminy ilay tianao nambara. Ho tapaka tanteraka ny fifandraisanao aminy amin’izay fotoana izay.